इन्फिनिटी लघुवित्तको आईपीओ जेठ १३ गतेदेखि आउँदै, सर्वसाधारणको लागि कति कित्ता ? | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर इन्फिनिटी लघुवित्तको आईपीओ जेठ १३ गतेदेखि आउँदै, सर्वसाधारणको लागि कति कित्ता ?
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १३:०३ मुख्य खबर, लगानी
इन्फिनिटी लघुवित्तको आईपीओ जेठ १३ गतेदेखि आउँदै, सर्वसाधारणको लागि कति कित्ता ?
जेठ २, काठमाडौं (अस) । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ जेठ १३ गतेदेखि विक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले ६ लाख ७४ हजार कित्ता आईपीओ विक्री खुला गर्न लागेको हो । जसमध्ये १० हजार ३ सय ७० कित्ता कम्पनीका कर्मचारीको लागि, ३३ हजार ७ सय कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि र बाँकी रहेको ६ लाख २९ हजार ९ सय ३० कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ । आवेदकले यस आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ३ हजार ३ सय ७० कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा जेठ १६ र ढिलोमा असार १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको देखाउँछ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड छ ।
आवेदकले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण सि आस्बा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १४ करोड छ । आईपीओ निष्कासन बाँडफाँट पश्चात पूँजी रू. २० करोड ७४ लाख पुग्नेछ । कम्पनीले हाल सम्ममा ४२ ओटा शाखा कार्यालयहरुबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
इन्फिनिटी लघुवित्तको आईपीओ आउँदै, सेबोनमा स्वीकृत
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार १३:१५
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १२:३८
इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओलाई ग्रेड ४ रेटिङ
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १३:३७
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १४:५४